Ungangibonisa indlela yokuthola i-backlink ngaphandle kokulimaza izikhundla zami?
Ngaphambi kokukubonisa indlela yokuthola i-backlink ngendlela engcono futhi ngaphandle kokuthola isijeziso esinzima, ake sihlaziye ngokujulile endabeni. Asikho isidingo sokuthi kufanele udale izixhumanisi zekhwalithi ukupompa ithrafikhi yosesho olwengeziwe kuwebhusayithi yakho noma kubhulogi. Futhi mhlawumbe kukhona umsebenzi obonakala kunazo zonke kodwa okwamanje kakhulu futhi okhudlwana "wokuthola" lezo backlink ezifanelwe nokuqukethwe kwakho. Ngakho-ke, umuntu kufanele ahlale edala okuqukethwe okukhulu ukuheha izixhumanisi eziningi ngokwemvelo, i. e. , indlela ephephile kunazo zonke. Kodwa umbuzo uhlala - indlela yokuthola i-backlink ngemibhalo yakho yekhasi elikhangayo kahle, enikezwe ukuthi ukuheha izethameli ezimiyo nokuzidonsa ndawonye kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi, kuzodingeka ukuthi ube nesidingo esihle sokuxhumanisa - nje ukuheha abaqotho kakhulu izivakashi futhi uzivumele zixhumanise kuwe?
Okuqukethwe Ingabe iNkosi - Ngokuphindaphindiwe
Kusho ukuthi kufanele usebenze ngokuqhubekayo futhi uqale ukusebenza ngokuqukethwe kwakho okuyingqayizivele nokufanele okwamanje. Kodwa ufuna ukwazi ukuthola i-backlink ngokuphepha ukuze ungakhathazeki ngalezo zingozi ezingase zibe yingozi ezingaphezu kwewebhusayithi yakho noma ibhulogi, kwesokudla? Ake sibhekane nakho - ukugwema izinhlawulo ezihlobene nomzamo wokwakha oxhumana nabo ovamile akukhona ngenhlanhla yakho - kungukuthi uthola ama-backlink aphezulu kakhulu ngokwemvelo nangokwemvelo. Kusho ukuthi ngemuva kwe-backlink yemvelo enombhalo owenziwe kahle owenziwe emthonjeni othembekile futhi onokwethenjelwa umthombo wesithathu ohambisana niche yakho noma imboni yebhizinisi - ngeke uphinde ujeziswe. Futhi kungenakuthi noma yikuphi ukukhokha, ukushintshaniswa noma amacebo amaningi wezakhiwo zokuxhumanisa kufanele kugwenywe ngaphandle uma ufuna ukuphakamisa ifulegi elibomvu nge-Google bese uzithola uhlawulo olusheshayo nolungenakugwema ukusekelwa.
Nansi indlela yokuthola i-backlinks yekhwalithi eliphezulu ukuze ujabulele ukuthutha kwe-intanethi esheshayo - izinga alinandaba nje ukuthi uzizwe uphephile kepha ukukusiza kahle ukuhambisa iphrojekthi yakho yonke ekuhlosweni kwayo kwe-SEO esikalini. Ngakho-ke, ngezansi ngizokuhlonza izindlela ezimbili eziyinhloko ezingasiza ekukhiqizeni okuqukethwe komsindo - yiqiniso, ikakhulukazi ngenxa yokwakha isixhumanisi.
Yiba nokuqukethwe kwekhasi elixhaswe ngokugcwele Ukukhokha nge-Cash
Yenza umsebenzi wokuthola ama-freelancers - zama ukuthola abalobi bezobuchwepheshe abahamba phambili ngaphakathi kwe-niche yakho jikelele. Akuyona into ecasulayo - emva kwakho konke, ukuba nakho konke okukhona futhi okuhambisana nezidingo zakho kuyafaneleka ukukhokha. Okungenani ekuqaleni, uze uzuze amandla futhi uzokwazi ukusingatha okunye okuqukethwe okuzwakalayo ngaphandle kwanoma yikuphi ukusizwa komuntu wesithathu. Ukusikisela: ungalokothi ugijimane nokufinyelela okunamandla, kungcono usebenze ngokuthobeka futhi uqale ingxoxo ye-imeyili enomusa, uzethule, iphrojekthi yakho ye-intanethi, futhi ngokuqinisekile usebenzisa isikhathi esanele sokuhlola wonke umlobi wokuqukethwe othembisayo ngaphambi kokuqashwa.
Yiba i-Altruistic - Nikeza ulwazi lwakho oluhle kakhulu Ukukhokha nge-Time
Ngokuvamile, uma kuziwa ekutholeni ama-backlink ngomsebenzi wakho, abaningi bethu ngikholelwa ngokungafanele ukuthi ukubhulolwa kwezihambeli cishe kuyisixazululo esisenzayo kuphela. Kodwa akuyona indaba yonke, ngiyakwazi ukukuqinisekisa. Nasi uhlu oluthile lwamaphuzu e-bullet for reference yakho yesikhathi esizayo:
Zama ukubhala ezinye izikhala ezihambelana nezivakashi ukuze uthole le backlink efanelekile kusuka kwesigaba se-bio. Lokhu kungaba kuhle ukuqala kwe-kickass, kodwa lo mzila awuwona ophumelelayo ukusetha uxhumano olunamandla ngempela.
Cabanga ukutshala isikhathi sakho nemizamo ekudaleni izinhlobo ezilandelayo zokuqukethwe ezivezwe kakhulu ukuze wabelane nazo futhi uzixhumanise, njengeziqondiso eziwusizo, izifundo zakho zokwenza ucwaningo, izibalo ezithandayo, amaspredishithi awusizo, njll.Qaphela: zama ukuphinda ufake kabusha okuqukethwe kwakho okukhona - akukho sidingo sokuvuselela isondo, kunjalo?
Ukusebenza ngokuqhubekayo ukuze uqalise ubukhoma obuqinile kwi-intanethi kumithombo yezenhlalo hhayi kuphela ukugqugquzela okuqukethwe kwakho okunamandla nokwanelisayo kepha ukuthuthukisa igama lakho lomkhiqizo noma ibhizinisi lakho ngesikhathi esifanayo.
Ngokwe-backlink eyigugu kakhulu kodwa engatholakali kahle evela kumasayithi wezemfundo noma kahulumeni ane-PageRank ephezulu kanye nesixhumanisi sokuxhumanisa, cabanga ukusetha i-scholarship, ukugijima emncintiswaneni, noma ukubethelwa ngesibindi - nikeze i-athikili efanelwe ngokukhethekile etshela kanye nalokho abafuna ukukuzwa. Khumbula, izinhlanhla eziyigugu kakhulu nezokuphepha akuyona imali kuphela ngemva kwakho konke Source .